काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता भत्काउने आपराधिक काममा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । सामूहिक राजीनामा दिनु अपराध हुने भन्दै यस्ता काममा सहभागी नहुन पार्टीका सांसदहरुलाई आग्रह गरे । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘के यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनेलाई.....
अबको प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस प्रचण्ड कि देउवा ? तिन दलको यस्तो भयो सहमति
काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई समूहको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य अगाडि बढेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने औपचारिक निर्णय गरेर माओवादी.....
सांसद पदबाट योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको राजीनामा, ओलीलाई कडा झडका
काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअगावै नेकपा एमालेका केही प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु भने राजीनामा दिन लागेका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचित.....
यि सुरुबात हुन, अब कसरी देश पुरै माओवादीमय हुनेछ, त्यो समय टाढा छैन
काठमाडौं, वैशाख । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । दाङ क्षेत्र नं। २ (ख) बाट निर्वाचित एमाले सांसद डाँगी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद दामा शर्माले डाँगी माओवादीमा प्रवेश गरेको र औपचारिक रुपमा.....
पार्टी फुटाएर प्रचण्डसँग मिल्ने उपेन्द्र-बाबुरामको अन्तिम तयारी आखिर किन ? पूरा पढनुहोस
काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर प्रचण्डसँग मिल्ने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई गुटले तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । उता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का बरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णले माओवादी बन्ने रहर भए तत्काल प्रचण्डतिर लाग्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चेतावनी दिनुभएको छ । यादवका पछिल्ला गतिविधि.....
काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसले अबको केही दिनभित्रै मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने विश्लेषण गरेको छ । सो पार्टीले माओवादी केन्द्र र जसपासँगको निरन्तरको वार्ता फलदायी भएकाले केही दिनमै केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने दावी गरेको छ । काँग्रेसको पूर्वपदाधिकारी तथा वर्तमान पदाधिकारीको बुधबार सभापति.....
अब प्रदेशहरु खारेज गरी, सय जनाको संसद र दस जनाको मात्रै मन्त्रिमण्डल हुने
काठमाडौ । नेपाललाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनका लागि प्रदेशहरु खारेज गरी, सय जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रि मण्डल बनाऔं, विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि ठूलो आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालका लागि नेपाली अभियानका एक अभियान्ता समेत रहेका बालकृष्ण न्यौपानेले.....
शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ तर दलितहरु मात्र तयार रहनुहोला: प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि दलित समुदायलाई तयारी अवस्थामा रहन अपिल गरेका छन् । राष्ट्रिय दलित पत्रकार महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार बुटवलमा सम्बोधन गर्दै उनले आफू दलित समुदायको ऋणी भएको बताए । दलितको साथ नभएको भए आन्दोलन.....
हामिले मान्ने अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी जि, अब मिलेर एमालेलाई बलियो बनाउँछौं: भीम रावल
काठमाडौ । सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीम बहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतले माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर नेकपाको विषयमा फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रावलले यस्तो बताएका हुन्.....
प्रचण्डकि छोरि भन्छिन ओलीलेे मेरा बाबालाई सिध्याउन एकता गरेको रहेछ
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) प्रचण्ड-माधव समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव गंगा दाहालले केपी शर्मा ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुनकै लागि पार्टी एकताको नाटक रचेको बताएकी छन् । उनले पार्टी वि,भाजन भएको खुशीयालीमा ओली पक्षधरहरुले देशभर हर्सोल्लाह मनाइरहेको बताइन् । सर्वोच्चबाट.....